Mitohy ny tanjaky ny mpividy amin'ny andiany faha-10 an'ny IMEX America
Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Mitohy ny tanjaky ny mpividy amin'ny andiany faha-10 an'ny IMEX America
Ny talen'ny IMEX Ray Bloom ary ny talen'ny IMEX Carina Bauer.
Mpividy maherin'ny 3,000 no efa nisoratra anarana hanatrika ny IMEX America avy amin'ny vondrom-piarahamonina planner - maso ivoho hetsika, fikambanana, mpandrafitra orinasa ary tsy miankina - samy manana orinasa hipetrahana ary maro amin'ny ambaratonga ambony (voafaritra ho C-level, tale, tompona / mpiara-miasa).
Trano vaovao, fo mandeha amin'ny raharaham-barotra ihany
Ny fampisehoana dia momba ny fampifandraisana ireo mpividy sy ireo mpampiranty hametraka orinasa.
Ny hetsika dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny asa aman-draharaha maharitra, manome fotoana ara-potoana handrefesana ny fahatokisan'ny indostria sy ny firoboroboan'ny fotoana tena eo am-pihaonana amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miasa.
Ny fampisehoana dia atao ao amin'ny Bay Bayalay, 9-11 novambra any Las Vegas ary hialohavan'ny Smart Monday, ampandehanin'ny MPI, ny 8 Novambra.
Ireo masoivoho amin'izao fotoana izao dia mitaky 47% amin'ny fitambarany, mpividy orinasa 22% raha mpividy fikambanana kosa 9% ary mpividy tsy miankina 18% (hafa - 4%).
"Ao am-pony, ny fampisehoana dia momba ny fampifandraisana ireo mpividy sy ireo mpampiranty hametraka orinasa - io no fototry ny zavatra rehetra ataontsika. Faly izahay mahita ny fangatahana toy izany avy amin'ny vondrom-piarahamonin'ny hetsika mba hiverenanay ao amin'ny IMEX America amin'ity volana novambra ity. Ho an'ny maro amin'ny sehatry ny indostria, ny fandaharana dia natao handray anjara lehibe amin'ny fanarenana orinasa maharitra, manome fotoana ara-potoana handrefesana ny fahatokisan'ny indostria sy ny firoboroboan'ny fotoana maharitra raha mihaona amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miasa izay mbola tsy hitan'izy ireo mifanatrika. tarehy mandritra ny roa taona latsaka. ” Carina Bauer, CEO an'ny ny vondrona IMEX, miresaka momba ny fisoratana anarana mandeha ho azy amin'ny fampisehoana izay atao ao amin'ny Bay Bayalay, 9-11 novambra any Las Vegas ary ialohavan'ny Smart Monday, ampandehanin'ny MPI, ny 8 Novambra.
Ny matihanina amin'ny fivoriana sy ny hetsika dia asaina hanatevin-daharana izay atolotra ho laharam-pahamehana amin'ny indostrian'izy ireo ny fisoratam maimaim-poana, toy ny mahazatra. Ny mpanatrika dia afaka manantena traikefa an-tsehatra «azo antoka nefa tsy mandoza» natao hamaly ny filan'ny orinasa ankehitriny. Izy io dia hahafahan'izy ireo mametraka sy manomana raharaham-barotra amin'ny ho avy raha miditra amina programa fanabeazana miompana amin'ny làlana vaovao sy mpandahateny izay mahatakatra ny fanambin'ny indostria sy ny mety hidirany amin'ny 2022.
Ankoatry ny mpividy, misy fampirantiana iraisam-pirenena isan-kerinandro mifampiraharaha isan-kerinandro ary mandrafitra ny sehatra rehetra amin'ny indostria. Anisan'izany ireo toerana itodiana any Aostralia, Singapour, Dubai, Italia, Canada, Boston, Atlanta, Arzantina, Hawaii, Panama ary Puerto Rico ary koa vondrona hotely Four Seasons, Wyndham Hotel Group, Mandarin Oriental Hotel Group ary Associated Luxury Hotels International.
Hoy ihany i Carina: “Nandray anjara lehibe tamin'ny fanampiana anay ireo mpiara-miombon'antoka aminay mba hamoronana seho mivantana izay taratry ny toe-draharaha misy ankehitriny ary lasibatra amin'ny filan'ny fiarahamonina. Miara-miasa akaiky amin'ny toeram-pivarotanay vaovao ihany koa izahay - Mandalay Bay - sy ny tanàna mampiantrano - LVCVA - mba hahazoana antoka fa mahafeno ny fenitra ambony indrindra amin'ny fahasalamana, fiononana ary fiarovana ny IMEX America. Ny tanjonay dia ny hamorona seho izay tohanan'ny fepetra fiarovana azo antoka ary eo am-pitaterana ny fikasihan'ny IMEX mahazatra ny fahafinaretana, ny fanahy ary ny fo izay fantatray fa tadiavin'ny vondrom-piarahamonina ankehitriny. ”
Miandrandra ny andiany faha-10 an'ny IMEX America, i Carina sy ny filohan'ny IMEX Ray Bloom dia miresaka momba ny filan'ny tsena mihombo, ny fampiroboroboana ary ny zanabian'ny mpividy, ny fanovana ny traikefa an-tsehatra sy ny maro hafa - jereo ny "Resadresaka nifanaovana tamin'i Carina" farany Eto.
Ny IMEX America dia atao ny 9 - 11 Novambra ao Mandalay Bay any Las Vegas miaraka amin'ny Alatsinainy Smart, ampandehanin'ny MPI, amin'ny 8 Novambra. Hisoratra anarana - maimaim-poana - kitiho Eto.